देशमा केही गर्छु भन्नेलाइ पालैपालो समाउदै छन, एकपटक सबै जनता उठ्ने कि? - Taja Report
Homeसमाचारदेशमा केही गर्छु भन्नेलाइ पालैपालो समाउदै छन, एकपटक सबै जनता उठ्ने कि?
July 10, 2018 समाचार Comments Off on देशमा केही गर्छु भन्नेलाइ पालैपालो समाउदै छन, एकपटक सबै जनता उठ्ने कि?
एकपटक जुरुक्कै उठौ:–
देशमा केही गर्छु भनेर लाग्नेहरुलाइ पालैपालो समाउदैछ्न, अनेक प्रपन्च रचेर केही गर्नै नदिने अबस्था सिर्जना गराउदैछन। निस्वार्थ समाजसेवा र सही पत्रकारिता गर्ने देशभक्तहरुमाथी चौतर्फी घेराबन्दी हुदैछ, कुँडाकर्कटहरुको कब्जामा देश गैरहेको छ।
देश सक्काउने भाइरस, कमिसनखोर, दलाल र भ्रष्टाचारि नेताहरु अपराधीहरुलाइ भकाभक छुटकारा दिदै देशभक्तहरुलाइ जेल हाल्न तम्सिरहेका छन। यो सन्दर्भमा हामी सम्पुर्ण नागरिक एकजुट हुनुपर्दछ। अब एकपटक देशका लागि लड्नुपर्ने भएको छ।
स्मरण रहोस एकजना(डा केसि) ले संघर्ष सुरु गर्दा नै लोकमानसिङ कार्की जस्ता तानाशाह ढले, गोपाल पराजुली जस्ता प्रधानन्यायाधीश ढले , गोपाल खड्का जस्ता आयल निगम प्रमुख निष्क्रिय भै निस्किन बाध्य भए र अझै देशका मेडिकल माफियाहरु सङ्ग लडिरहेका छन हाम्रा लागि हाम्रो सन्ततिका लागि, धुर्मुस सुन्तली ले ३-४ बस्ती बसाइ “नमुना नेपाल” “कृकेट स्टेडियम” ” अस्पताल सरसफाइ ” जस्ता अझै धेरै अभियानको नेतृत्व गर्दैछन, माहाबिर पुन सरकार र नेताको आश्वासनको भकारी बाट वाक्क दिक्क भएर आफै एउटा ठूलो लक्ष्य साथ अघि बढ्दैछन, रबि लामिछानेले त के गरे भनिसाध्य छैन जगजाहेर छ।
यसरी हेर्दा देशमा केहि गर्ने भनेको यिनैले हो, तर भ्रष्ट नेता कार्यकर्ता, बिकाउ पत्रकारको झुन्ड , कमिसनखोर नेता कर्मचारी यिनैलाइ बारम्बार तारो बनाइ आक्रमण गर्दैछन, लखेट्न खोज्दैछन, कतै थन्क्याउन खोजिदैछ , र देशको ढुकुटिमा भ्रष्टको रजाइँ गर्न खोज्दैछन ।
जनताको पावर लाई नजरअन्दाज नगरियोस , …
सेयेर गरि यो अभियान र यी सपुतहरुको समर्थन गरौ ।
अनि देशका भाइरसहरुको भन्डाफोरका लागि एक हौ।
बिहान उठेर सूर्यलाई जल चढाउदा यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्, नत्र पुरा हुदैन पूजा